Ukuhlaselwa kwamaphela eNew York nge-wave wave | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma ungathandi i- izindiza, noma uma une-phobia, impela elinye lamaphupho akho amabi kakhulu kungaba ukuba edolobheni elihlaselwa yibo, akunjalo? Futhi kubonakala sengathi ukushisa kuyabenza basebenze, lapho eNew York kunabantu abaningi ngokuqinisekile abangeke babe nobumnandi obuningi kulezi zinsuku.
Noma ungacabanga ukuthi lezi zinambuzane zithanda amazinga aphezulu okushisa, empeleni azithandi. Eqinisweni, abakwenzayo bafuna indawo epholile yokuzivikela kubo, njengoba kuchaziwe ku Ulwazi lwe-DNA.
ENew York City ngoMgqibelo, Agasti 13, ithemometha lalifundeka I-36,1ºC futhi kwakukhona umswakama wama-65%; ngeSonto i-mercury ibimi ku-33,88ºC kanti bekukhona umswakama ongu-50%. Umswakama lokho, njengoba kuchaziwe nguprofesa wase-University of Texas eTyler, bathanda lapho kuhambisana namazinga okushisa aphezulu.
Into ehlekisayo ngakho konke lokhu ukuthi amaphela awandizi ngaphandle kokuthi impilo yawo isengozini, ngakho-ke uma izimo zezemvelo zingemnandi zizomosha amandla zibheke izindawo ezipholile; kepha bazokwenza kuphela uma kwenzeka kushisa kakhulu futhi kunomswakama, kusukela thola amandla ngokushisa okubazungezile, njengoba kuchaziwe nguDominic Evangelista, one-Ph.D. evela kwaRutgers futhi ogxile emaphethelweni.
Ngakho-ke, abahambi ngezindiza besuka kwenye indawo beya kwenye ukuyocasula abantu baseNew York kanye nezivakashi abajabulela amaholide abo, kepha ngenhloso eyodwa yokufuna ikhoneni noma umhosha onendawo enconywana engcono kubo, ngoba, Yize amandla okushisa ebenza basebenze, bakhetha ukuchitha amahora nezinsuku ezindaweni ezipholile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Ukuhlaselwa kwamaphela eNew York ngamandla okushisa
Ukuguquka kwesimo sezulu kungaqeda ama-Olimpiki